हेर्नुपर्ने १५ फिल्म - www.kchhakhabar.com
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण १५, २०७४ समय: १२:१३:०८
‘दि रेभेनान्ट’ गत वर्षको सबभन्दा चर्चित फिल्म हो । यसले ओस्करमा उत्कृष्ट निर्देशक, फिल्म र अभिनेताको अवार्ड पायो । यसका निर्देशक अलेजान्द्रो गोन्जालेज इनारितुले ‘बर्डम्यान’ पछि दोस्रो ओस्कर यसका लागि पाए भने लियोनार्डो डिक्याप्रियोको लामो ओस्कर प्रतीक्षालाई यसले अन्त्य गरेको थियो ।
प्राकृतिक स्रोतको उपभोगमा आदिवासी र आप्रवासीको लामो द्वन्द्वलाई यो फिल्मले आफ्नो विषय बनाएको छ । हिउँ नै हिउँको जंगलमा एक्लै छोडिएको घाइते मानिसको संघर्षको यो कथामा निर्देशकले चलाखीपूर्वक मानिस जातिले गरेको संघर्षका झलकहरू घुसाएका छन् ।
भोलिपल्ट सहरमा ठूलो जादूको ‘सो’को तयारीमा रहेको जादूगर आफ्नो जिराफलाई घाँस हाल्दै छ । एउटा विरक्त लेखकसँग कुरा गर्दै जादुगरले जिराफलाई गायब बनाउँछ । आफ्ना दु:खले विक्षिप्त हुँदै गएको वृद्ध लेखक भन्छ— मलाई पनि यसरी नै गायब गरिदेऊ न । जादूगर भन्छ— मैले साँच्चिकै गायब गर्न सक्ने भए आफ्ना दु:खहरू गायब गर्ने थिइनँ होला ? यसरी सहर–सहर जिराफ बोकेर हिँड्थे ?
४० वर्षअघि लेखेको उपन्यासको ब्याज खाएर बसिरहेको लेखकको दोस्रो पुस्तकको सकसको बारे भए पनि ‘द ग्रेट ब्युटी’ विचार, भावना र दर्शनको सम्मिश्रण हो । युरोपेली सिनेमाको एउटा केन्द्र इटली हो । र, ग्रेट ब्युटी त्यसको प्रमाण ।
चिनियाँ सहरमा जापानीको आक्रमण जारी छ । युद्धले सहर तहसनहस भइसकेको छ । एउटा चिनियाँ सिपाही अनेक जुक्ति लगाएर जापानीलाई तर्साइरहेको छ । एक जना अमेरिकी स्वयंसेवक सिपाहीको फन्दामा परेको छ । र, क्रिस्चियन नन बन्नका लागि पढिरहेका केटीहरूको बीचमा अचानक सहरमा वेश्यावृत्ति गर्ने युवतीहरू आश्रयका लागि आइपुग्छन् । युद्धका बीचमा यी पात्रहरूको आपसी खिचातानी, इष्र्या र प्रेमको कथा हो, ‘फ्लावर्स अफ वार’ ।
चिनियाँ निर्देशक च्याङ यिमुको यो फिल्ममा हलिउड स्टार क्रिस्चियन बेलले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका छन् । चिनियाँ संस्थापनका आलोचकका रूपमा स्थापित भएका यिमुले पछिल्लो कालमा चीन निर्माण र यसको इतिहासमाथि रुचि लिएर बनाएका फिल्ममा यो पनि पर्छ । इतिहासलाई कलात्मक ढंगले देखाउने कलाका लागि यो फिल्म प्रशंसनीय छ ।
हङकङका फिल्म निर्देशक वङ कार वाई आफ्ना प्रयोत्मक फिल्मका लागि प्रसिद्ध छन् । एकातिर उनले ‘इन द मुड फर लभ’ र ‘२०४६’ जस्ता फिल्म बनाएका छन् भने उनैले नोरा जोन्सलाई लिएर ‘माई ब्लुबेरी नाइट्स’ पनि बनाएका छन् ।
‘इन द मुड फर लभ’ आकर्षण र अविश्वासको कथा हो । १९६० को हङकङमा एउटै अर्पाटमेन्टमा बस्न आएका दुई विवाहित युवा–युवतीको कथा यसमा छ, जो आफ्नो दम्पतीबाहेक अर्कातिर आकर्षित हुन्छन् ।
सिनेमा पारखीहरूका बीच पेड्रो अल्माडेभोर चिनाउनुपर्ने नाम होइन । स्पेनका यी निर्देशक
आफ्ना प्रयोगधारी फिल्मका कारण संसारभर चर्चित छन् । यिनकै फिल्म ‘अल अबाउट माई मदर’ले नेपालको ओस्कर–इन्ट्री ‘क्याराभान’लाई पछि पार्दै ओस्कर जितेको थियो । तर, मेरो फेभरेटचाहिँ ‘टक टु हर’ हो । एउटा पुरुष–नर्सको एक युवतीप्रतिको अव्यक्त प्रेमको यो कथा पेड्रोका अरू फिल्मजस्तै फरक छ ।
माजिद माजिदी संसारभर मन पराइएका इरानी फिल्म निर्देशक हुन् । उनका ‘चिल्ड्रन्स अफ हेभन’, ‘कलर अफ प्याराडाइज’, ‘बारान’जस्ता फिल्म प्रसिद्ध छन् । बालमनोविज्ञान र इरानी समाजमा व्याप्त गरिबी र अभावका विषयमा उनी धेरै फिल्म बनाउँछन् । ‘सङ अफ दि स्प्यारोज’ पनि यही कोटीको फिल्म हो ।
मजदुर श्रेणीको पिताको संघर्ष र उसको बालक छोराको कथा यो फिल्ममा छ । रंगीविरंगी माछा पाल्नका लागि पोखरी सफा गरिरहेको बालक र उसकै लागि अस्ट्रिचलाई दाना हाल्नेदेखि तेहरानका सडकमा मोटरसाइकल–ट्याक्सी चलाउनेसम्मको काम गर्ने पिताको उदासीको गाथा यो फिल्मले भन्छ ।
एजेन्सी । भारतीय चर्चित नायिका तथा पूर्व विश्वसुन्दरी ऐश्वर्या राय बच्चनले आमाको तस्बिर पोष्ट गर्दै ‘तिमी छौ र त म छु’ भ...
बैंकक । थाइल्याण्डमा १८ वर्षीया लाम्याई हाइथोन्गखाम उत्तेजक डान्सका कारण चर्चित छिन् । उनका ‘सेक्सी मुभ’ ले उनलाई देशैभर...
कट्रेनीको न्यूड फोटोसुट
कार्दशियन दिदीबहिनीहरूको चर्चा कामले भन्दा बढी तस्बिरले हुनेगर्दछ । किम देखि उनकी बहिनी कट्रेनीको चर्चा पहिरन, न्यूड तस्...
यी एक पोर्न स्टार आफ्नाै देशमा ज्यान मार्ने धम्की (फोटोफिचर)
एजेन्सी । नेपाल भारतलगायतका केही देशमा पोर्न सुटका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हुन त भारतकी सन्नी लियोनीले पोर्न स्टारमै आ...